नेकपा अध्यक्ष दाहाल किन भए निराश ? « Postpati – News For All
नेकपा अध्यक्ष दाहाल किन भए निराश ?
फागुन २४, काठमाडौं । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगत केही दिनयता सरकारको कामकारबाहीबारे निराशाजनक अभिव्यक्ति दिँदैछन् ।
यो समाचार टपेन्द्र कार्कीले नागरिकमा लेखेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सुखी नेपाली समृद्ध मुलुक’को नारा बनाई सरकार सञ्चालन गरिरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले भने सरकारका कामको समीक्षा गर्ने बेला भएको अभिव्यक्ति भएका छन् ।
उनले बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतको उपस्थितिमै सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न सकेको वा नसकेको भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । दाहालबाट सरकारको समीक्षाको कुरा किन आइरहेको छ ? नेकपा स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले पार्टीभित्र सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको धेरै महिना भइसकेको बताए ।
सरकारमा रहने र सरकारका कामकारबाहीका विषयमा किन आलोचना भइरहेको छ भन्नेबारेमा समीक्षा गरौं भन्ने कुरा उठिरहेको उनले बताए । ‘गएको स्थायी कमिटी बैठकमा यो विषयमा कुरा उठेको थियो तर सरकारको समीक्षा गर्नकै लागि छुट्टै बैठक बस्ने भनेपछि त्यस बेला समीक्षा हुन सकेन र सरकारको समीक्षाकै लागि भनेर बैठक पनि बस्न सकेन त्यस कारण दाहालले प्रधानमन्त्रीका अगाडि समीक्षाको कुरा उठाउनुभएको हुनसक्छ’, उनले भने ।